Sales Outreach: Matanhatu Matanho Anokunda Mwoyo (Uye Mamwe Matipi!) | Martech Zone
Kunyora tsamba dzebhizinesi ipfungwa inodzokera kumashure. Panguva idzodzo, tsamba dzekutengesa dzepanyama dzaive tsika yaida kutsiva vashambadzi vepasuo nesuo nematangi avo. Nguva dzemazuva ano dzinoda nzira dzemazuva ano (chingotarisa shanduko pakuratidzira kushambadza) uye kunyora tsamba dzekutengesa bhizinesi hazvisi izvo.
vamwe zvakajairika misimboti zvine chekuita nechimiro uye zvinhu zveyakanaka tsamba yekutengesa zvichiri kushanda. Izvo zvakati, chimiro uye urefu hwetsamba yako yebhizinesi zvinoenderana nerudzi rwevateereri vako uye chigadzirwa chaunoda kutengesa. Iyo yakajairwa kureba i4-8 ndima, asi inogona kuve yakawanda kana zvigadzirwa zvako zvichida rondedzero chaiyo, kana zvishoma, kune zvimwe zvakanangana zvinopihwa.
Nekudaro, isu ticha tarisa pane anobatsira hacks ayo asingakwanise kungokubatsira iwe kuvhara madhiri asiwo kuhwina vateereri vako 'moyo.
Sarudzo 1: Shandisa otomatiki Kugadzira Yako Bhizinesi Rekutengesa Tsamba
Kana iwe uchida kuti mabhizinesi ako ekutengesa tsamba akunde moyo, iwe uchafanirwa kumira nenzira dzakawanda. Kutanga, iwe unozofanirwa kugadzira zvekugadzira uye kuita chimwe chinhu chako pachako. Kutumira manotsi akanyorwa nemaoko inzira huru yekuita kuti tsamba dzako dzitumire, zvisinei, kuzvinyora wega kunogona kutora nguva.
Neraki, iwe unogona kushandisa tsamba yakanyorwa nemaoko iyo inogadzira maitiro ese uye inoita kuti zvinyorwa zvako zvionekwe senge zvakanyorwa neruoko rwemunhu uchishandisa peni chaiyo. Kutumira tsamba yebhizinesi seiyi, ine inotaridzika inoratidzika, yakasarudzika manyorerwo, ndiyo nzira huru yekukunda moyo wemugashiri.
Sarudzo yechipiri: Sanganisira Yakasimba Yemagariro Chiratidzo
Hapana chinotengesa zvirinani pane chigadzirwa chakanzi "chinoshandura hupenyu" nemaonero uye zviitiko zveavo vaishandisa. Izvi hazvireve kuti chigadzirwa chako chinofanirwa kuve neshanduko, asi chinofanirwa kuve nehukama hwakasimba hwehukama hwakaumbwa nemazwi evatengi vakagutsikana.
Ndicho chikonzero nei zvakanaka kuti ubatanidze humbowo hwemagariro mune tsamba dzako dzekutengesa. Kupa zvinongedzo kune vhidhiyo zvipupuriro imwe nzira yekuzviita. Iyi nzira inopupurirwa kunyatso kutyaira kutengesa.
Yevatengi vhidhiyo chipupuriro chirevo chekutanga cheiyo CTA (Call to Action) bhatani iyo inofanirwa kuve yakamisikidzwa pazasi pechipupuriro. Chinangwa ndechekushandisa iko kukurumidza kwemanzwiro akanaka uye kurudziro iyo chako chipupuriro chakamutsa muvaoni uye zvakasununguka kuvapa iwo mukana wekutenga (kuburikidza neCTA).
Sarudzo 3: Shandisa LinkedIn Automation Zvishandiso
Iko hakuna nzvimbo iri nani yevatengesi veB2B yekuwedzera uye kutumira tsamba dzekutengesa kupfuura LinkedIn. LinkedIn ipuratifomu yakakura yebhizimusi uko marudzi ese ehunyanzvi anoungana kuti vadzidze, network, kuwedzera bhizinesi ravo uye kushambadzira zvigadzirwa zvavo kana masevhisi Iwo musika wakasarudzika une mikana yakawanda iyo inofanirwa kubvisirwa yako yekutengesa zano.
zhinji LinkedIn otomatiki maturusi inogona kukubatsira iwe kuzadzisa akakwirisa emazinga ehukama nenzira yekugadzira. Semuenzaniso, zvimwe zvezvishandiso izvi zvinopa hunhu hwemufananidzo kuitira kuti ugone kuwedzera zita remugashiri kana pikicha yepikicha mukati memufananidzo, kuti zviwedzere kuve zvemunhu. LinkedIn otomatiki maturusi anogona zvakare kubvisa ruzivo rwakakwana kubva kune ako echaoni vateereri 'profiles uye kugadzira iwo akasarudzika uye enji meseji semunhu akazvinyora.
Sarudzo 4: Gadzira Iyo Yekuvhura Yega Iwe
Kumwe kukanganisa kukuru pakunyora tsamba yekutengesa ikwaziso isina kukodzera. Hapana munhu anofarira kwaziso dzakadai sa "Anodiwa akavimbika mutengi" kana "Anodiwa muverengi". Pane kudaro, vateereri vako vanoda kunzwa vanokosha, vanoremekedzwa, uye vanobatwa zvakasiyana.
Ndosaka uchisanganisira mazita avo nehunyanzvi (hwemabhizinesi eB2B) mukukwazisa kwako, inzira yechokwadi yekuvaratidza kuti urikutaura chaizvo nemunhu chaiye. Kuenda na "Anodiwa Ben" kana "Anodiwa Chiremba Richards" kunokutora iwe nzira refu uye nekuona kuti iye anogamuchira achazoda kuverenga tsamba yako kumberi.
Ine vateereri vakawanda, zvinonetsa kuti utaure nemunhu wega nenzira yakasarudzika uye nyora tsamba yega yega yakagadzirirwa ivo. Ndipo panowanikwa otomatiki zvinobatsira uye inochengetedza yakawanda nguva nekuunganidza manyorerwo sezita, basa, murume kana mukadzi, nezvimwe.
Sarudzo 5: Shandisa Mavhidhiyo Ekutengesera Kwako
Vhidhiyo parizvino ndeimwe yeakanyanya anodikanwa zvemukati mafomati iyo inotyaira kubatikana zvisingaite uye inogona kunyudza vateereri kupfuura chero imwe fomati. Iwe unofanirwa kuishandisa kune yako mukana uye kuiisa mune ako mabhizinesi tsamba kuti rako rekutengesa pombi riwedzere kushanda.
Vhidhiyo pombi inogona kubata pakarepo muoni uye nekukurukura muchidimbu misoro iwe yaunowanzo kufukidza uchishandisa mameseji fomati. Nevhidhiyo, unogona kusanganisira zvinoitika zvinoitika zvebasa rako muchiito, kuratidza kugutsikana kwevatengi vako, uye pakupedzisira, batanidza zvakadzika nevateereri vako.
Zvishandiso zvakawanda zvinogona kukubatsira iwe kugadzira yakasarudzika vhidhiyo meseji ine yakawanda hupfumi mifananidzo uye inoona-inobata maziso, ayo anotyaira kutendeuka.
Strategic 6: Shandisa Countdown Nguva
Iwe unogona kusanganisira yekuverengera nguva kumaemail ekutengesa sezvo vachigona kuvaka pfungwa yekukurumidzira mumunhu ari kuverenga. Iyi timer inofanirwa kuve yakamisikidzwa kumusoro, pazasi pemusoro wenyaya, yakavakwa nechitarisiko chinokatyamadza icho chinobata kutarisisa.
Chinangwa chako hachisi chekumhanyisa asi kuratidza iwo akanakisa maficha echigadzirwa chako uye kusimbisa kuti iyo nguva yekuita ishoma. Izvo zvakati, iwe uchiri kuda kuve nemhinduro inoshanda kune avo ekurwadziwa mapoinzi uye nenzira kwayo yekuratidzira nayo.
Heano Mamwe Mamwe Ekuwedzera Ekutengesera Matipi
Heano mamwe matipi ekuti utengese bhizinesi rako tsamba tsamba dzinokunda moyo:
Ita shuwa yekuziva vateereri vako uye nekunyatsovamisa zvikamu kuti iwe ugone kuziva kwavo chaiko
Gadzira zvinyorwa zvinomanikidza uye misoro mikuru inowirirana nerudzi rwevateereri vako
Sanganisira anopfuura maCTA anopfuura imwe paakasikwa (pazasi pako vhidhiyo zvipupuriro, pakupera kwetsamba, nezvimwewo)
Shandisa zvikorekedzo kugadzira manzwiro muvaverengi vako
Shandisa zvakavanzika mabhokisi mutsamba yako yese kuti vaverengi vaverenge zvakanyanya mune imwe ku kuzvigadzirisa
Nguva dzose isa chako kupa pane peji rekutanga
Usapfuurire neruzivo, sanganisira chete echokwadi ezvechokwadi, maficha, uye humwe hunhu hunhu chigadzirwa chako & sevhisi inayo
Shandisa nzira dzakaratidzirwa senge Johnson bhokisi kuratidza mabhenefiti ezvekupihwa kwako mutsamba yese
Chii chinonzi Johnson Bhokisi?
Makumi matanhatu emakore apfuura, nyanzvi yekushambadzira Frank H. Johnson akaedza kana aigona kuwedzera mamitero ekupindura kune ake tsamba dzekutengesa kuburikidza nenzira inozivikanwa seyakanaka se Johnson Box. Iyo Johnson Box inotaura kupihwa mumusoro wenyaya pamusoro pekukwazisa.
Kunyora kukuru mabhizimusi ekutengesa kusvika kune imwe nzira inofungisisa uye inoda. Mashoko ako anofanirwa kunyatso nyorwa, zvemukati zvanyatsogadzirwa uye fungidziro mushure mekuverenga inofanira kuchema "ichi chigadzirwa chinopa kukosha".
Uye zvakare, kushandisa hacks kunoponesa nguva yako uye kupa mamwe mapfupi ekudzivirira nemaoko kuita zviwandisa mabasa. Hacks inogona zvakare kuwedzera kubata kwehunhu uye kugona kune yako yekutengesa zvemukati zvemukati, zvakagadzirirwa kune vateereri vako uye zvavo zvakasarudzika.
Yakasimba yekutengesa kopi ndiyo musimboti webhuku rebhizinesi rakabudirira uye zvine hungwaru kushandisa hacks musuwo wekuhwina moyo yevanogamuchira.
Tags: tsamba dzebhizinesicountdownKuverenga nguvactamail yakanangachokwadi johnsonteknolojia yekunyorazvakanyorwa nemaokotsamba yakanyorwa nemaokozvakanyorwa nemaokosei kunyora tsamba dzekutengesajohnson bhokisitsamba yebasakunyora tsambalinkedin kushandisa michinamutsetse wekuvhuramazano ekuparidzirakopi yekutengesakutengesa kopi yekunyoratsamba dzekutengesakutengesa kusvikamazano ekutengesa kunzemavhidhiyo ekutengesa kusvika
David Wachs muzvinabhizimusi anoteedzana, David azvino basa, Yakanyorwa nemaoko, irikudzosa hunyanzvi hwakarasika hwekunyora tsamba kuburikidza nemhinduro dzinotyisa, dzemarobhoti dzinonyora zvinyorwa zvako mupeni. Yakagadziriswa sepuratifomu, Handwrytten inoita kuti iwe utumire manotsi kubva kune yako CRM system, senge Salesforce, iyo webhusaiti, maapplication, kana kuburikidza netsika yekubatanidzwa.